घर / ब्लग / यी बाथरूमहरू पनि धेरै मूल्यवान छन्, के तपाईंले ती सबै देख्नु भयो?
2021 / 04 / 21 वर्गीकरणब्लग 1267 0
बाथरूम एक त्यस्तो स्थान हो जहाँ हामी प्रत्येक दिन बारम्बार छुन्छौं, र यसको सफाई, भण्डारण र संगठन, र वातावरणको सिर्जनाहरू सबै मालिकको स्वादसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। एक उच्च गुणवत्ताको बाथरूम डिजाइन पछाडि, त्यहाँ एक नाजुक आत्मा लुकाउनुपर्दछ। तर उही पुरानो तरीकाको फरि .्गले अनिवार्य रूपमा मानिसहरूलाई बोरिंग महसुस गराउँदछ। आज हामी केहि बढी ट्रेंडी, अधिक अनौंठो टाईल गर्ने तरिकाहरू साझा गर्छौं ब्लान्ड घर सजावटको लागि हाइलाइटहरू सिर्जना गर्न!
दुबै फेशनल र रेट्रो स्वभावको फूल टाइल, निश्चित रूपमा भित्री आंख खिच्ने उपकरण बन्न सक्छ। यो चहकिलो र colors्गहरू, बान्कीहरू, रचना धेरै आँखा मनपर्ने छ। चाहे प्रदर्शनका लागि पृष्ठभूमि, वा स्थानीय श्रृ emb्खलाको सानो क्षेत्रको रूपमा, तपाईं अप्रत्याशित प्रभावहरू काट्न सक्नुहुन्छ, ताकि बाथरूमको शैली अचानक बढाइनेछ।
क्लासिक वर्ग कोलाज
नियमको मध्यमा टाइल बनाउने, अर्डरको भावना ल्याउन। स्वच्छ रेखा, सरल र उज्यालो टोनहरू, र वर्ग टाइल आफैले लालित्यको भावना प्रस्तुत गर्दछ, मानिसहरूलाई अतुलनीय दृश्य अनुभव दिँदै।
यदि तपाईं संयमको सफा र सफा भावना तोड्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सुक्ष्म रेखा परिवर्तनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै आई-बीम सुन्दरता बढाउन र स्थिर तहहरू देखाउन।
उही र color्ग भित्ता र भुइँ टाइलहरू
फ्लोर र भित्ता टाइलहरूको लगातार शैलीले दृश्य विस्तारको रूपमा काम गर्न सक्दछ, खाली ठाउँ अधिक विशाल, खाली र सम्पूर्णताको बलियो भावनाको साथ देखाउँदछ।
बिभिन्न रंग भित्ता र भुइँ टाइलहरू
भित्ता र फ्लोर टाइलहरूको बिभिन्न टोन र शैलिक शैलीको समृद्ध भावना सिर्जना गर्न अधिक अनुकूल छन्। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को यस युगमा, अपरंपरागत, मौलिकता, असाधारण ठाउँ डिजाइन प्राप्त गर्न।
अघिल्लो :: किन अन्य व्यक्तिको बाथरूम सधैं राम्रो देखिन्छन्? अर्को: विश्वको पहिलो! एक सुरक्षित र उपयोगी सिट-इन बाथटब, ताकि तपाईं आफ्नो स्थानमा "नुहाउन" सक्नुहुन्छ